18 Talo Oo Ku Saabsan Barbaarinta Caruurta - Daryeel Magazine
Caruur barbaarintu waa xirfad ay waaliddiintu is dheer yahiin. Sida xirfadaha kale oo dhan, qofkii barta barbaarinta hagaagsan ee caruurta, waxaa inta badan laga gartaa caruurta uu tarbiyeeyay. Waayo xigmad caan ah ayaa oranaysa: “Qof waxuu bixiyaa, waxuu hayo!”. Sidee ayuu waalid ilmahiisa si wanaagsan ugu barbarian karaa, hadii aanu ogayn ama aqoon waajibka saran?
Halkaan waxaad ka helaysaa oo daryeelmagazine.com kugula wadaagayaa talooyin kaa caawinaya sidii aad u barbaarin lahayd caruur ku korta mabaadi’da Islaamka.